Ikamelo Lesivakashi Elithokomele w/I-Priv Half Bath - I-Airbnb
Ikamelo Lesivakashi Elithokomele w/I-Priv Half Bath
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Nathan
Sawubona lapho! Sikumema ukuthi uhlale ekhaya lethu elihle lase-Lake Forest Park. Leli kamelo elikhulu lezivakashi linombhede omkhulu ongu-1, indlu yokugezela yangasese enguhhafu, amakhabethe amade, ifasitela elikhulu elikhanyayo, amasilingi aphakeme, nedeski. Kunekamelo elikhulu elihlanganyelwayo elinekhishi elincane, ingadi engemuva, neshawa.
Indlu izungezwe okuluhlaza futhi itholakala kalula ngemizuzu engu-15 ukusuka e-Univ. yase-Washington nemizuzu engu-20 ukusuka e-Space Needle. Ukuthenga, izindawo zokudlela, nokudla phakathi nemizuzu engu-3.
Uma ufuna indawo yokuhlala enyakatho ye-Seattle, nginamakamelo okulala ambalwa amakhulu, angasese, anefenisha ekhaya elihle kakhulu elivulekile, elihlelwe ngokuphelele izivakashi eziphakathi/zesikhathi eside.
Leli kamelo elikhulu elihle lezivakashi linombhede omkhulu owodwa, ikhabethe elikhulu, nedeski. Amafasitela amakhulu nophahla oluphakeme lwenza ikamelo libukeke livulekile kakhulu. Indlu yokugezela yangasese enamathiselwe inosinki nendlu yangasese. I-shower ehlanganyelwayo ingeyesimanjemanje enophahla oluphakeme nendawo eshintshayo.
Ikamelo Elihle yindawo enkulu, enhle ehlanganyelwayo enezihlalo eziningi, itafula lomphakathi, i-TV, nekhishi elincane. Ikhishi linezinto eziyisisekelo: i-microwave, isiqandisi, isitofu sikagesi esiphezulu, iketela lamanzi, umshini wokwenza ikhofi, nosinki (alikho uhhavini).
Ikamelo lesivakashi lingena endaweni yokungena yesivakashi ehlukile. Siphinde sibe nengadi enkulu, enhle ukuze uyijabulele futhi uphumule.
I-Lake Forest Park itholakala ekupheleni okunyakatho kweLake Washington. Ikhaya lethu liseduze nechibi namapaki ambalwa amahle. Phakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo yindawo yedolobha, enezindawo zokudlela, izindawo zokuthenga ukudla, nezitolo ze-lite. Phakathi nezinyanga zasehlobo, kukhona neMakethe Yabalimi eyenzeka enkabeni yedolobha.
Sitholakala emizuzwini engu-15 ukusuka e-Northgate Mall, imizuzu engu-15 enyakatho ye-University of Washington, imizuzu engu-20 ukusuka e-Space Needle, imizuzu engu-25 ukusuka e-Bellevue, imizuzu engu-25 ukusuka e-Everett.
Indlu ihlukaniswe kahle phakathi kwendawo yezivakashi nendawo yethu. Mina nomkami nathi sihlala endlini, futhi sizotholakala noma nini lapho sidingeka.